FAMPIOFANAN'NY VONDRONA TENY GASY 2.0
Teny ibeazana, mampiofana ny vondrona TG2.0
01 marsa 2020
— Tatitr'i Toetra Ràja —
Notanterahina tao amin'ny CEMDLAC Analakely ny tolakandron'ny 29 febroary 2020 ny lanonam-pamaranana ny fiofanana nozarain'ny vondrona TENY GASY 2.0. Nandritra ny sabotsy telo voalohany tamin'ny volana febroary no nanatanterahana ny fiofanana araka izao fandaminana izao:
- famoronana blaogy novelabelarin'ny Teny Gasy 2.0
- fanitsiana tsipelin-teny nentin'ny tranonkala Pôetawebs
- fampiasana ny ohabolana malagasy nozarain'ny pejy Facebook "Ahoana ny fanoratra?"
Tamin'ny roa ora no nisantatra ny lanonana tamin'ny alalan'ny dihy ny Tarika Rohy Kanto.
Sary ankavia : Tsikimilamina Rakotomavo, nisolo tena ny MSK
Ragasy no tonian-danonana sady nanentana.. Nanelanelanana ny fotoana ny slam niangalian'i Antso Fy Tia sy Conan, niampy ny tononkalo nifandimbiasan-dry Tsiry, Y-Sorakanto, Diamondra sy Domoina.
Nisantatra ny lahateny i Ando Rasolondraibe avy ao amin'ny TENY GASY 2.0. Nandimby azy kosa i Tsikimilamina Rakotomavo, Talen'ny Maha Izy ara-Kolontsaina sady nisolo tena ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina (MSK).
Nampiavaka an'ity lanonana ity ny fanolorana mari-piofanana ho an'ireo 31 navitrika nanatrika ireo fiofanana rehetra. Anisan'ireo mpanolotra izany ny avy ao amin'ny Ministeran'ny Serasera sy i Ando Rasolondraibe.
Ireo 31 mianadahy nozaraina mari-piofanana